Rita, Writing for My Sake!: ကသစ်ပန်း
Posted by Rita at 1/15/2010 12:38:00 AM
wow.. u do appreciate Burmese music. I also like most of Myo Ma Nyein song. He isaawesome song writer. I also like Nan Daw Shay Sayar Tin's song. Anyway, Thanks for the link.
People used to make mistake The song named " Ka Thit Pan" and The movie which was starred by Moet Moet Myint Aung and Ye Aung called "Tha Khoot Pan". I think that's why pple confused.
သီချင်းလေး လာယူသွားတယ် ..
ရီတာ ကြိုက်တဲ သီချင်း တွေ အား လုံးနီးပါးကို ကြိုက်ပ။ ရီတာ့ လိုတော့ နားလည်ပြီးကြိုက်တာမဟုတ်။ လူ (pane) ကြိုက်ကြိုက်တာ။ ကြားဖူးနေကျတွေမို့လို့ နေမယ်။ သီချင်းတွေအတွက်ကျေးဇူးပါ။ :)
ဒီလို သီချင်းဟောင်း သီချင်းကောင်းတွေကို ကျောင်းတွေမှာ ကဗျာသင်သလို သင်ရင် ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိပါတယ်။
ဆိုတာလေး ဟက်ဟက်ပက်ပက် ထောက်ခံမိတယ်
ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားတာက အသူရာတွေ အရက်သောက်မူးမေ့နေတုန်း သိကြားမင်းက အသူရာတို့ဘုံကို သိမ်းတာဆိုတော့ နတ်ပြည်မှာ အရက်သောက်လို့ ရတယ်ဆိုတာပဲ ... အရက်သောက်လို့ ငရဲပြည်ရောက်တယ်ဆိုတာ ချွင်းချက်တော့ရှိမယ် ဟီးဟီး ..( သေသေချာချာ မသိပါ )
I like Myo Ma Nyein' songs.
I try to play some tune of Myo Ma Nyein.
http://www.zshare.net/download/712360266c95b23d/ ( ချစ်တာပဓာန - ဟေမာနေဝင်း)
(ရေချိုးဆိပ် - ဝင်းဦး )
ကြက်သီးတောင် တဖြန်းဖြန်းထမိပါတယ်။ နားထောင်ရင်းနဲ့။
ဟုတ်ကဲ့ ကျတော့်စက်ထဲမှာလည်း အသင့်ရှိနေလို့ ... ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ ဝမ်းသာပါတယ် :)
ကသစ်ပန်းက ဝင်းဦး ဆိုထားတာလည်း ရှိတယ်။ သူဆိုပုံက မာမာအေးနဲ့ ဆင်တယ်။ အဲဒီသီချင်းမှာတော့ မာမာအေး ဆိုတာကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။
အဲဒီခေတ် က သီချင်းရေးစရာ တွေ ရွှေနှင်းဆီ ၊ ခိုင်မာလာ နှင်းဆီတို့ ၊ စံပယ် တို့ ပန်းလှလှလေးတွေ ကို သီချင်းရေးဆရာ တွေ ရေး ကြလို့ ။ မြို့မငြိမ်းက သူတို့ အချင်းချင်း နောက်ပြီး သခွပ်ပန်း ဆို တဲ့ နံမည်နဲ့ ရေးတယ်လို့ မှတ်သားဘူး တယ်။ အဲဒီလိုတမင် မလှအောင် သခွပ်ပန်း လို့ရေးတာကို ပဲ မလှဘူး ဆိုပြီး ကသစ်ပန်း လို့ပြောင်းခေါ်ကြရင်း ကသစ်ပန်းအမည်တွင်ပါသတဲ့။
အုံ့ကာလေ တဖွဲဖွဲ ရွာလေ တသဲသဲ နေရာအကြိုက်ဆုံးပဲ
ညီမ ရီတာ ကျေးဇူးနော်...
Link တွေ ယူသွားတယ်...
မိုးအေးအေးနဲ့ဆို သီချင်းတွေ နားထောင်ရတာ ပိုကောင်းမလား တွေးမိလို့ပါ...း))
အားလုံးပဲ နှစ်သက်ကြတယ် ပြောလို့ ဝမ်းသာမိပါတယ်။
ကသစ်ပင်လေး တပင်ပဲလွဲတာ.. တာဝတိသာကို လွမ်းလောက်ပါ့မလား ..
အဓိက က pride ကြောင့် ဖြစ်မယ် ထင်တယ် ..း)